द वे अफ द हाउसहबन्ड सिजन ३
by लिली गार्सिया 5th नोभेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड द वे अफ द हाउसहस्बन्ड सिजन ३ रिलिज मितिमा
गृहिणीको बाटो भनेको क स्लाइस अफ लाइफ एनिमे जुन मूल रूपमा अप्रिल ८, २०२१ मा बाहिर आएको थियो। यो उही नामको मङ्गाको रूपान्तरण हो, जुन धेरै लोकप्रिय छ, धेरै जसो एनिमे. यसले तात्सु नामको मानिसलाई पछ्याउँछ, जसले लामो समयसम्म अपराधको जीवन बिताएपछि यसलाई छोड्ने र आफ्नो पार्टनरसँग स्थिर जीवन बिताउने निर्णय गर्छ। The Way of the Househusband Season3फ्यानहरूले आशा गरेको कुरा हो। त्यसोभए यो हुनेछ?
सिंहावलोकन - गृहपतिको बाटो
कथाको मुख्य कुरा यही हो टाट्सु आफ्नो पुरानो गिरोहका सदस्यहरूसँग समस्यामा पर्दै जान्छ। यसले कथालाई तल जानका लागि धेरै फरक कथाहरू थप्छ र हामी श्रृंखलामा धेरै रमाईलो र चाखलाग्दो क्षणहरू पाउँछौं जसरी यो अगाडि बढ्छ। द एनिमे मेरो विचारमा धेरै राम्रो कथा कथन थियो र संवाद धेरै हास्यास्पद थियो। को दृष्टान्त गृहिणीको तरिका लाई श्रेय दिइन्छ Kousuke Oono.
आफ्नी श्रीमती फोनमा रहँदा Tatsu ले एउटा बिरालो समात्छ।
आफ्ना पुराना सहयोगीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्दा, उनीहरू बसेको ठाउँमा घरको कामको ख्याल राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी कार्यहरू कहिलेकाहीं Tatsu को लागि गाह्रो हुन सक्छ, जसले सबै कार्यहरूलाई धेरै गम्भीरतापूर्वक लिन्छ। तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले एक सुन्दर रमाईलो एनिमेको लागि बनाउँछ, र कुनै पनि प्रशंसकहरूले The Way of the Househusband Season3को लागि आशा गरिरहेका छन्।
गृहिणीको बाटोको अन्त्य
कथा मुख्यतया तात्सुले आफ्नो पुरानो मध्ये एक संग आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी समाधान संग समाप्त हुन्छ Yakuza (म मान्दै छु) खाना पकाउने टूर्नामेंट प्रयोग गरेर सहयोगीहरू। यद्यपि द एनिमे अन्त्य बिल्कुल निर्णायक थिएन। दोस्रो सिजनको अन्तिम एपिसोडमा आफ्नो भागलाई सम्बोधन नगरिएका धेरै अनटाइड टुँडहरू थिए। हाउसहुस्ब्यान्डको मार्ग। यी अनिश्चित र निष्कर्षमा नपुगेका समस्याहरू पक्कै पनि The Way of Househusband Season3मा सम्बोधन गरिनेछ।
अब म स्वीकार गर्छु कि अन्त्य वास्तवमा केहि विशेष थिएन, मैले हामीले दिएको भन्दा राम्रो प्रकारको अन्त्य भएको धेरै कम-प्रोफाइल एनिमे देखेको छु। हाउसहुस्ब्यान्डको मार्ग। आशा छ, को एक सीजन3गृहिणीको तरिका हामीलाई केहि थप अन्तरदृष्टि दिनेछ टाट्सुको प्रतिद्वन्द्वी र उनको विगतको जीवन बारे थप।
के हाउसहबन्ड सिजन ३ को बाटो सम्भव छ?
द वे अफ द हाउसहडब्यान्ड सिजन २ मा रिलिज भएको थियो Netflix on अक्टोबर 7, 2021। यद्यपि, दोस्रो भागमा मात्र5एपिसोडहरू छन् जुन 17-19 मिनेट लामो छन्। यो मेरो लागि धेरै अचम्मको छ, र यसले मलाई अलिकति रिसाएको छ।
जहाँसम्म लोकप्रिय छ एनिमे को टुक्रा चिन्तित छ, द वे अफ हाउसहबन्ड सिजन ३ को अझै JCS स्टाफ वा द्वारा घोषणा गरिएको छैन। Netflix.
पहिलो सिजनको समीक्षा हेरौं। तिनीहरू अत्यधिक सकारात्मक र चाखलाग्दो थिए। मानिसहरूलाई यो मनपर्दछ एनिमे। अब दोस्रो सिजन हेरिसकेपछि एनिमे, म भन्छु कि यो द वे अफ द हाउसहस्बन्ड सिजन3को लागी पनि हुनेछ।
साथै यो Netflix एनिमे स्पेसमा बढ्दै गइरहेको तथ्यलाई औंल्याउन यो चतुर हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। रूपमा झन् प्रष्ट हुँदै आएको छ Netflix यसको बढ्छ एनिमे पुस्तकालय सधैं।
जस्तै विज्ञप्ति संग कोमी संचार गर्न सक्दैनन् (जुन हो Netflix मौलिक), र निलो अवधि यो स्पष्ट छ कि यो एक क्षेत्र हो Netflix मा विस्तार गर्न चाहन्छ।
द वे अफ हाउसहबन्ड सिजन ३ कहिले रिलिज हुन्छ?
मैले पहिले भनेको कुरालाई ध्यानमा राखेर, म व्यक्तिगत रूपमा भन्न चाहन्छु हाउसहुस्ब्यान्डको मार्ग नवीकरण गर्न सेट गरिएको छ। यो निश्चित छ। साधारण तर्क प्रयोग गरेर हामी यो निर्धारण गर्न सक्छौं कि यदि त्यहाँ 3rd सिजन छ भने, यो सम्भवतः मा रिलीज हुनेछ 2022 सायद मा तेस्रो क्वाटर? म यसको बारेमा धेरै निश्चित छैन तर मलाई विश्वास छ कि यो धेरै सम्भव छ।
वर्षको अन्त्यसम्ममा सिजन ३ प्राप्त गर्ने कुनै आशा छैन। तर, यो अर्को वर्षको सुरुमै आउने हो भन्नु धेरै हुँदैन । पढ्नको लागि धन्यवाद, कृपया तपाइँको सबै प्राप्त गर्न तल साइन अप गर्नुहोस् पालना दृश्य तल ईमेल अद्यावधिकहरू।
थप अपडेटहरू प्राप्त गर्न साइन अप गर्नुहोस्
Cradle View आधिकारिक व्यापारिक सामान किन्नुहोस्
अघिल्लो प्रविष्टि टाइटन सिजन3को अन्त्यमा आक्रमण सुन्दर छ
अर्को प्रविष्टि एलिट को कक्षा को व्याख्या